Professor Axmed Ismaaciil Samatar wuxuu ka mid yahay aqoonyahannada waaweyn ee Soomaalida kuwooda safka hore, hadduusanba ahayn kan koowaad. Waa indheergarad maskax-maal ah oo si joogto ah isha ugu haya waxa ka socda Soomaaliya iyo adduunkaba. Wuxuu aad u taxliiliyaa is-beddelka xaaladaha caalamka. Wuxuu wax ku bartay dalka Mareykanka muddo hore. Wuxuu haddeer hormuud (Dean) ka yahay Institute for Global Citizenship, Macalester College. Sidoo kale, waa James Wallace Professor ee dhinaca culuunta caalamiga (International Studies). Wuxuu shahaaddada B.A. ka qaatay University of Wisconsin (La Crosse) sannadkii 1978-kii. Saddex sano kaddib 1981-kii, wuxuu shahaaddada M.A. ka qaatay University of Denver. Isla mar ahaantaas, wuxuu shahaaddada Ph.D. ku diyaariyey isla jaamicaddaas sannadkii 1984-kii. Prof Samatar, wuxuu muxaadarooyin ka soo jeediyey jaamicado iyo kulliyado dhowr ah oo ay ka mid yihiin; University of Amsterdam, Cornell, Harvard, Iowa, London School of Economics and Political Science, Oslo University, University of Pennsylvania, Jaamicaddii Ummadda Soomaaliya, Toronto University, York University, School of Oriental and African Studies (SOAS) ee Jaamicadda London iyo Wellesley College. Wuxuu wax ka qoray, kana tifatiray dhowr buug - waxaa buugaagtiisaas ka mid ah; The Somali Challenge: From Catastrophe to Renewal, Socialist Somalia; Rhetoric and Reality, The State in Africa: Reconsiderations, Somalia: State Collapse, Multilateral Intervention, and Strategies for Political Reconstruction iyo Literature, the Creative Imagination and Globalization. Wuxuu qoray in ka badan soddon maqaal-cilmiyeed. Wuxuu tifatire ka yahay journal-ka Bildhaan oo ah kii ugu horreeyey ee caalami ah ee falanqeeya culuunta Soomaalida. Wuxuu kaloo tifatire ka yahay 22 qaybood oo ka mid ah Macalester International oo ah warside waxbarashada iyo caalamiyeynta. Prof Samatar oo ah Fulbright Fellow, cilmi-baarista uu hadda ku dhex jiro waa hoggaaminta iyo khibradda Soomaalida. Waxaa ii suura-gashay inaan dhawaan xafiiskiisa oo ku yaalla magaalada St Paul ee gobolka Minnesota kula kulmo, kulana sheekeysto. Waxaa na dhex maray is-wareysigan:
Su’aal: Dr Samatar, marka hore waxaan jecelahay inaad guud-martid taariikh nololeedkaaga - halkii aad ku dhalatay, ku soo barbaartay iyo sidii aad ku timid waddankan Mareykanka?
J: Waa su’aal ballaaran. Anigu in badan baan ka hadlay, wax badanna waan ka qoray. Horta dadka Soomaalidu iyagaa is gabay oo halkaan is dhigay. Itoobiya kuma aysan soo duusheen haddii aanay jirin dowlad iyo madax dhab ah. Maanta waxay ugu soo dhacday inay soo duusho waxaan jirin cid albaabka ilaalinaysa. Aniga waxay ila tahay saddex arrimood ayaa u sabab ah soo gelidda Itoobiya ee waddanka ay qabsatay; 1. Itoobiya oo weligeedba doonaysay inay Soomaaliya ka dhigato meel ay xukunto ama dad u xukuma ay u joogaan, waayo dhul bey naga haysataa iyo iyadoo badda hunguri ka hayo oo doonaysa meel ay saani xoolaheeda uga soo dejisato. 2. Dowladda ku meel gaarka dadka hoggaamiya oo iyaguna saaxiib la ah Itoobiya, muddo dheerna halkaa joogay oo heshiis ku yeeshay inay madaxtinimada ay heleen ay Itoobiya u adkeyso. Shirkii Nairobi ka dhacay, dowladda Itoobiya gacanta aad bey ugula jirtay, waxayna ku guuleysatay in dadkii ay doonaysay ay shirkaa ku soo baxaan. 3. Dadkii Soomaaliyeed ee waddanka deggenaa oo qaasatan ay ugu horreeyaan nimankii wadaaddada ee Maxkamadaha Islaamiga oo intii gaabnayd ee ay waddanka hayeen shaqa wanaagsan ka qabtay, haddana qashiinnimo, badownimo, degdeg iyo hanjabaad aan loo baahnayn ay ka timid. Meel la doonayey in dab laga shido ayay batrool ku shubeen, Itoobiyana marmarsiinyo ayay ka dhigatay. Qasaaraha ay keentay Itoobiya waa mid aan weli sheekadiisa la gelin. Dad badan oo Soomaali ah ayaa lagu baa bi’iyey. Aniga tirada i soo gaartay waa 6,000 inay ku dhinteen, 20,000 in ku dhowna ay ku dhaawacmeen, malyuun in ku dhowna inay xoolahoodii ku baa be’een oo ay cidla iyo cadceed iyo haraad ay is haystaan. Markaa dowladda Itoobiya mas’uuliyad weyn ayay ku leedahay, xisaabteedana markaan madax dhab ah yeelanno oo aanu dad noqonno ayaa la geli doonaa.
S: Waxaa taariikhyahannada iyo culumada cilmiga Anthropology ee ay ka midka yihiin; Dr Saadia Touval, Dr Maxamed Cabdi (Gaandi) iyo Dr Ioan M. Lewis ay isku wada raacsan yihiin in markii ugu horreysay ee la maqlo magaca 'Soomaali' laga dhex maqlay gabay-digasho ah oo uu tiriyey nin boqor ka ahaa Itoobiya qarnigii 14-aad, kaddib markii uu dagaal kaga guuleystay dad Soomaali ahaa. Markaa ka hor, magacyadii Soomaalida loogu yeeri jiray waxay ahaayeen Zinji iyo Berber, sida ku cad qoraalladii ay ka tageen sahmiyeyaashii Carbeed, Ibni Batuuta iyo Ibni Saciid. Haddaba, sidee lagu soo afjari karaa colaadda hakan weyday ee Soomaaliya iyo Itoobiya u dhexeysa toddobada qarni? Ma kula tahay aragti dhaxalgal ah in Soomaaliya ay la saxiixato Itoobiya heshiis 100 sano oo colaad joojin ah?
Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo Mohamed Haji (Ingiriis) | Minneapolis, MN
J: Anigu horta kulama qabo 1960-1969-kii in sagaalkaas sannadood inta la isku jumladeeyo inay yihiin tuugo, corruption, been iyo xoolaha dowladda oo la cuno. Waa in la kala qaybiyaa. Anigu buug weyn oo ah kii ugu horreeyey ayaan ka qoray. Sannadihii 1960-1967-kii anigu waxaan qabaa inuu ahaa waqtigii waddanku uu sida wanaagsan u socday. Wey jireen dad musuqmaasuq ku jira oo waa la kala qeybsanaa markii la soo galayey xukunka oo laga hoos baxayey Talyaaniga iyo Ingiriiska. Waxaa jiray dad musuqmaasuq u fahamsan dowladnimada, gaar ahaan jeeb ay iyagu iska yeeshaan oo ay cunaan. SYL laf ahaanteeda ayaa dad caynkaas ah ay ku jireen markii dambe. Laakiin waxaa jiray dad fara badan oo Aadan Cabdulle iyo Cabdirisaaq Xaaji Xuseen ay ugu horreeyaan oo xariir ah oo shaqadoodu iyo hamadoodu ay ahayd inay waddankooda dhisaan, in kaydka yar ee ummaddu leedahay iyo wixii sadaqo lagu siiyana si wanaagsan loo maamulo. Musuqmaasuqu wuxuu qarixiisa yimid 1967-1969-kii. Saddexdaa sannadood ayuu dillaacay. Waa tii Madaxweynihii waddanka lagu dilay. Ninkii police-ka haystay, Maxamed Abshir waa tii lagu kallifay waa inaad ciidammada amar ku siisaa inay dhulkaa tagaan oo ay dowladda ugu shubaan codka dadka. Wuu diiday, waa tii jagada laga qaaday. Laakiin in dad badan oo siyaasadda Soomaalida ku jira ay musuqmaasuqa ku dheereeyaan, taasi taariikhda ayaa dhigaysa. Haddaad i weydiisay waxani xaggee ka yimaaddeen? Wey fara badan tahay. Horta dad sabool ah beynu nahay, oo weligeed iyo allahood gaajo iyo abaar ay wejiga ka saaran tahay. Dadka sidaa qarka ugu nool, in yar haddey arrintu ka xumaato, waa in wixii u dhow ay gacanta geliyaan illeyn badbaado ayaa kugu waajib ah. Dadka wax badan haysta oo xooluhu ku badan yihiin, musuqmaasuqa ka dhex jira wey qarsan karaan, laakiin ma qarsan karaan dadka jeebkoodu maran yahay. Marka dad sabool ah oo weligoodba roobkaa yar ee Ilaaheey keenay iyo beer yar oo wax lagu rido ku nool beynu nahay. Gumeysigu isagana wuxuu ina baray xukun haddaad yeelato inaad adigu waxaad doonto sameyn karto, qofkii kugu diidana aad afka jebiso ama si kale u kadeedo, qaasatan Talyaanigu taas wuu ina baray.
S: Soomaaliya, waxaa muuqata inay simbiriiraxatay oo ay ka dhacday haadaan dheer, welina ay suurta geli la’ dahay in laga soo bixiyo godka ay gashay. Waxaad, haddaba, mooddaa inuu nagu dhaboobay hadalkii ninkii gabyaaga ahaa (Saciid Gacamey) ee yiri "haddaan nabadda tiirkaan ku xiro loogu tegi waayin, oo toobiyahaan anigu maro maydku tira-beelin." Sidee u maleynaysaa in nabadda Soomaaliya tiirka looga furi karo? Xaggee kula tahay in wax laga billaabo?
J: Aqalku saldhigga ayuu ka billaabmaa. Saldhigga Soomaalida dhaqankeedu muxuu yahay? Dadka badankood waxay ku oranayaan waa qabiil. Anigu taa ma oggoli. Qabiilku waa wasaq meel kale ka timid. Anigu waxaan qabaa in sheyga ugu horreeya waxa weeye in maamuuskii, sharafkii iyo edebtii diineed akhlaaqdeedii la soo celiyo. Diinteenna keliya kuma koobna ee diimaha kale, sida Masiixiga iyo Yuhuudduna wey dhigayaan. Diin waxaa loo soo dejiyey Ilaah ka baq iyo edeb adduunyadan lagu yeesho. Markaa waa in edebtaasi soo noqoto oo la helo dulqaad, daacadnimo, run-sheeg, nabadgelyo iyo deeqsinimo. Taa qof walba guriga uu joogo waa inuu ka billaabaa. Tan labaadi waxa weeye; inaynu fahanno siyaasaddu inay tahay markey macaan tahay mid ku dhisan distoor iyo dood xalaal ah, oo aad garato in qofka dooddaada ka soo horjeeda inaad dhegeysato, qaasatan xaq inuu u leeyahay in diidmada uu kuu qabo uu sheegto. Tan saddexaad waa inaynu garanno; in rasaas, toorri, waran, bud iyo dhagax la tuuro, wax allaale waxay dhisaysaa inaysan jirin. Haddii gurigaaga laguugu yimaado oo naftaada keen lagu yiraahdo waa inaad is daafacdaa, laakiin ummad inaan lagu dhisi karin violence waxaa noo macneeyey Nelson Mandela, waana inaan taa fahannaa haddaan Soomaali nahay. Midda afraad; waa inaynu yeelanno karti aan dadka madax noo noqonaya ku kala saarno oo criteria loo sameeyo. Anigu waan dejiyey intii kartideyda ahayd, waxaana ka dhigay afar: 1. Qofku inuu leeyahay legitimacy oo halka uu yimid markuu doonayo inuu madax noqdo taariikhdiisa/taariikhdeeda waa in la baaraa, oo markaa la ogaadaa in qofkani uu xalaal ku soo koray oo uu halkaan ku yimid. 2. Qofku inuu la yimaaddo karti, haddaanu karti lahayn cirbad dun ma gelin karo. 3. Qofku inuu leeyahay vision iyo wax aanay dad kale arkeyn. 4. Qofku inuu leeyahay akhlaaq (ethics) oo iyadoon cidi ku ilaalinayn aad adigu is ilaalinayso. Mid baan ku sii shaneynayaa oo ah in qofku uu isku-keene yahay iyo mideeye, waayo kan qabiilka wata waa kala qeybiye.
S: Khubarada cilmiga siyaasadda, marka ay faaqidayaan ama falanqeynayaan dowladaha camiilka ama satellite-ka u ah dowladaha kale, waxay ku lamaaniyaan dowladdii Vichy ee Faransiiska ka dhisnayd 1940-kii illaa 1944-kii. Haddaba, dowlad-ku-sheegta ku meel gaarka ah ee Soomaaliya, ma la siin karaa magaca 'Vichy Regime'?
S: Ku xigeenka Xoghayihii hore ee Arrimaha Dibadda Mareykanka ee u qeybsanaa Africa, Ambassador Herman Cohen oo ka qayb galay waa dhexdaas ahayd dood ku saabsanayd Soomaaliya ee barnaamijka Straight Talk Africa ee VOA, waxa uu ku taliyey in la aqoonsado Somaliland, isagoo ku sababeynaya inay ka taariikh duwan tahay koonfurta inteeda kale. Waxaan wada ognahay inaad adigu mar walba diiddo fekradda gooni-u-goosiga (theory of secession). Markaan microscope-ka ku eegno - si weliba theoretical ah, maxaa faa’iido ah, maxaase khasaare ah oo ku jira in Somaliland ay ka go’do Soomaaliya inteeda kale?
S: Maamulka Mareykanku wuxuu ku jiraa wadammada loo tiriyo inay wax ka huriyaan mushkiladda ka oogan Geeska Afrika, siyaasaddoodii ku wajahnayd Soomaaliyana waxaa sutiga u qabtay dad mayal-adag oo xagjiriin ah oo ku socda cinwaanka buuggii Dr Robert Kaplan ee ahaa "Surrender or Starve" (Is dhiib ama macluul u dhimo). Sidaad arki kartid, waxa ay ku cadaadinayaan Soomaalida inay isu dhiibaan Itoobiya. Maxay tahay macaashka Mareykanku uu ku qabo in dagaalka sokeeye ee Soomaaliya uu sii socdo, iyadoo daleesha kale lagu andacoonayo inuu jiro welwel ku saabsan inaysan argagixisadu xididada ku aasan dalka? Ma waxay doonayaan inay Itoobiya u sii ceejiso Soomaalida?
J: Dowladda Mareykanka ee George Bush madaxda ka yahay inaaney dan weyn Soomaali u hayn weynu ognahay oo ay u sanqatay Itoobiya inay gasho Soomaaliya. Sannadkan iyo sannadka soo socda, 900 oo malyuun oo dollar baa Itoobiya loogu tala-galay mucaawinada Mareykanka. Qeyb libaax waxay galaysaa waxa la yiraahdo nabadgelyada Geeska Africa ee dowladda Itoobiya ay mas’uulka ka tahay. Laakiin dowladda Mareykanka iyada laf ahaanteeda waxay in badan raadisay, intuu Clinton madaxda ka ahaa iyo intuu George Bush aabbihii madaxda ahaaba, dad Soomaali ah oo karti leh oo ummaddoodii wada oo wax loo dhiibto oo wax la isku darsado ayaa la waayey. Maanta mustaqbal cusub ayaa na soo galaya, waayo George Bush waqtigiisii wuu soo dhammaanayaa, waxaana ka haray waxaan shan bilood ka badneyn. Marka ay timaado January 2009, madax cusub iyo dowlad cusub ayaa waddankan Mareykanka ka soo baxaysa. Weli waxay u eg tahay nin madow oo aabbihii African uu yahay, hooyadiina Mareykan caddaan ah ay tahay oo la yiraahdo Senator Obama inuu madaxweyne ka noqdo. Markaa Soomaalidu xisaab cusub ma la imaanaysaa, madax cusub, hadal cusub, haybad cusub ma keeni kartaa, mise wixii saddex madaxweyne oo Mareykan ah ay uga quusteen ayaa meesha yaalla? Haddii sidan la yahay la ahaado, dowladda Itoobiya waxaa loo qorayaa jeeg cusub oo la leeyahay kuwaa waraabayaasha ah ee Soomaalida ee Geeska Africa deggan ee qasaare, dil, dhac, been iyo baa bi’iska ka shaqeynaya idinkaa mas’uul ka ah ee ilaaliya, qufulna ku xira, wixii aad u baahan tihiinna dowladda Mareykanka wey idin siinaysaa inaad xoog arrintaa wax kaga qabataan haddaad tihiin Itoobiya.
S: Dadka u ololeeya xuquuqda bini’aadamku, waxay waayadan si aan leexleexad lahayn ugu daraan Mareykanka inuu ku jiro wadammada ku tunta xuquuqul insaanka, iyagoo tusaale u soo qaata xabsiga Guantanamo Bay oo noqday meel hannaanka caddaaladda iyo garsoorku ay ka yihiin 'la-jiifiyaana bannaan, la joojiyaanna bannaan.' Haddaba, sow taasi kuma xusuusinayso xikmaddii Martin Luther King ee ahayd in Mareykanku uu yahay ‘the greatest purveyor of violence on the planet’ (qaybiyaha ugu weyn ee qalalaasaha caalamka)?
J: Mareykanku laba weji buu leeyahay, mid qura uun ma ahan. Waddankani waxa weeye waddan dimoqraadi ah, adduunyada casriga ahna kan ugu da’ weyn weeye 1776-kii illaa iyo maanta, weliba xagga distoorka. Waa waddan bini’aadamka soo dhoweeya. Labadaan magaalo ee aan degennahay (twin cities) ee Minnesota waxaa ugu yaraan deggan illaa 30,000 oo Soomaali ah. Waa halka ugu badan Soomaalidu dhulka ay ka deggan tahay Mareykanka. Anigu waxaan ahay nin madow oo jaamacaddan qeyb weyn oo ka mid ah xukuma oo shalay Africa ka yimid oo Soomaali ah. Waddan kale oo taa ay ka dhacday anigu ma garanayo oo England waa anigii joogi jiray. Wejiga wanaagsan ee Mareykanku leeyahay waa distoor, naxariis, fursado badan xagga dhaqaalaha, siyaasadda, baayacmushtariga, tacliinta, teknoolejiga iyo noocaad doonaysid inaad gasho. Wejiga kale ee Mareykanku leeyahay waa inuu yahay waddan xoog leh, cunsuri ah, qaasatan nacayb dadka madow oo dhiiggooda ku jira, oo markaa sidey doonayaan ma ahane aan si kale oggolaan karin. Labadaas weji ayaa is barbar yaalla. Laakiin in badan waxaa laga soo shaqeynayey in wejigaa wanaagsan ee Mareykanku uu noqdo kan had iyo jeer la arki karo gudaha iyo dibadaba.
J: Taa waad qaldan tahay. Mareykanku muu abuurin al Qaeda. Mareykanku wuxuu gacan siiyey dad is urursaday oo Islaam baanu nahay leh oo la dagaallamayey Ruushkii qabsaday ee soo galay Afghanistan. Weliba Ruushku muu qabsan ee wuxuu gacan siinayey dowlad shuuci ah oo meesha ka dhalatay. Sidii loola dagaallamayey in laga saaro illeyn waxaa la isku hayey wixii la oran jiray dagaalkii qaboobaa (cold war) ayaa Mareykanku gacan siiyey dad yiri waxaan ka qayb galaynaa jihaad lagu saaro Ruushka. Halkaas ayay markaa ka soo bexeen dad dagaalkaa wax ku bartay lagula dagaallamayey Ruushka, kagana adkaaday, oo dabeetana dib isku urursaday oo siyaasad kale galay. Mareykanka haddii eed la saarayo, dadkii uu ururiyey ee uu hubka siiyey, lacagtana uu siiyey inay Ruushka kula dagaallamaan inay isagii dib kula soo jeestaan wey suura geli karaysaa. Laakiin Mareykanka wuxuu abuuray al Qaeda, markaasuu ku yiri kaalayoo intaad diyaaradaha afduubtaan soo gala world trade center, taasi caqliga ma geli karayso, wax lagu sheekeysan karana aniga xaggeyga ma ahan. Maanta dadka al Qaeda isku sheegaya qasaare uun bey dadkii Muslimka ahaa u keeneen. Haddii aad Saddaam Xuseen galayso, in waddanka Ciraaq la galo oo lagu duulo anigu ma aan oggoleyn, dadkii diiddanaa baan ka mid ahaa, qawaaniinta adduunka u taalla ee international law-na ma dhigayso arrintaas. Laakiin waa inaan annaguna ogaannaa, Saddaam Xuseen wuxuu ahaa dhiigyacab, waddankiisii iyo dadkiisii si baas u burburiyey. Iiraan oo aan cadaawad kala dhexeyn ayuu iska galay, Mareykankuna uu yiri haddii aad galayso adiga ayay ku jirtaa ee soco oo taageero buu siiyey. Malyuun qof ayaa ku dhintay dagaalkaas, wuxuuna socday toban sannadood. Waxay ahayd gardarro ka timid Saddaam Xuseen. Dadkiisii gaas buu ku furay. Laba wiil oo uu dhalay oo waraabe ah ayuu doonayey inuu waddanka u dhiibo markuu dhinto. Markaa Saddaam Xuseen inay dadka ku nool Ciraaq iska qabtaan mar hore ayay u ahayd. Haddii gacan lagu siiyey inay iska qabtaanna anigu waxba kama qabo, laakiin in waddanka Ciraaq lagu duulo oo ciidamo Mareykan ah la geeyo oo ummadda lagu baa bi’iyo, oo dhaqaalahoodii iyo adduunyadoodii lagu baa bi’iyo, lagana dhigo in ka badan saddex malyuun inay haajiraan, lana gaarsiiyo jugta caynkaas ah waxaa dambigeeda iska leh Mareykanka, xisaabta adduunyadana wey sugeysaa.
S: Dr Samatar, waxaa muddo dheer adiga iyo walaalkaa Professor Abdi Samatar aad ku howlanaydeen buug ku saabsan dhaxalkii ay reebeen Aaden Cadde iyo Cabdirisaaq Xaaji Xuseen (Somalis as Africa's First Democrats). Mufakir Giriig ah ayuu ahaa ninkii yiri, "Behind each written history, there is an unwritten history" oo macnaheedu noqonayo, "Taariikh kasta oo qoran gadaasheeda waxaa taalla mid aan qornayn." Sidaa darteed, waxaa jirta inaan la iska indha tiri karin in nimankii u horreeyey Africa ee xukunka kaga dega qaab dimoqraadi ah inay ahaayeen Cabdullaahi Ciise iyo Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. Maxay kula tahay?
J: Horta dhaqaalaha waxaa miftaax u ah siyaasadda. Siyaasaddu haddii ay kaa murugto, oo ay markaa dagaal, xagasho, burbur, guryihii dowladda iyo wixii oo dhan la baa bi’inayo, dhaqaalihii ma dhaqaaqayo, lacagtiina wey baxsanaysaa. Adduunyada oo dhan bal eeg, meeshii ay nabadgelyo jirto oo dowladdu ay shaqeynayso ayay lacagtuna tagtaa oo ay joogtaa in badan. Lacagta tagta dhulka dagaalladu ay ka dhacayaan ee burburka ahi waa lacag doonaysa inay degdeg wax u qabsato oo ay ka baxsato meesha oo xoogaa ay ka gurato, amba lacag si madow ku soo galaysa oo lacag xaaraan ah, ama drugs ha noqoto ama si kale ha ku timaado. Siyaasadda deggan ayaa miftaax u ah in dhaqaale la abuuro. Waayo dhaqaaluhu muddo dheer buu qaataa. Haddii aad warshad dhisayso muddo dheer bey qaadanaysaa inaad muhandasadii aad sameyso, dadkii aad keento, suuqii sameysato. Wadammada deggan ee xasiloon Africa gudaheeda haddaad eegto waa waddanka Botswana. Waddankaas xasiloonida iyo dimoqraadiyadda ka taagan qof tagay uun baa garan kara. Markaa derisku waxa weeye war Soomaaliyeey waa inaad siyaasaddii dejisaa.
Faafin: SomaliTalk.com | August 13, 2008